Regional Archives - Yangon Media Group
ပုသိမ်ခရိုင် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၌ ပင်စင်လာရောက် ထုတ်ယူကြသည့် အငြိမ်းစားများကို အလှူရှင်တစ်ဦးက အာဟာရဒါန လှူဒါန်း
ဧရာဝတီမြစ်ရေ စိုးရိမ်ရေမှတ် အထက်ရောက်ခဲ့သော ဗန်းမော်မြို့၌ မြစ်ရေကျဆင်းသွား၍ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ သန့်ရှင်းရေးများပြုလုပ်နေရ
ဗန်းမော်၊ ဇူလိုင်၂၂ မကြာမီ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဧရာဝတီမြစ် ရေစိုးရိမ်ရေမှတ်အထက် တည်ရှိ ခဲ့သော ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော် မြို့နယ်၌ယခုအခါနေရာအချို့၌ မြစ်ရေပြန်လည်ကျဆင်းသွားပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများ၌ ကိုယ်ထူကိုယ်ထသန့်ရှင်းရေးများပြုလုပ်နေကြကြောင်း သိရသည်။ ''ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာတော့ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရာအိမ်မှူး၊ အရန်မီးသတ်နဲ့...
ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းပါး ပြိုကျလာမှုကြောင့် ပွင့်ဖြူမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာငါးရွာမှ လူနေအိမ် ၃၅ လုံးဘေးလွတ်ရာသို့ ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့
ပွင့်ဖြူ၊ ဇူလိုင်၂၂ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာငါးရွာ၌ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်၊ နံနက် ၉ နာရီကဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါးပြိုကျလာမှုကြောင့် လူနေအိမ် ၃၅ လုံးဘေးလွတ်ရာသို့ ကြိုတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရကြောင်း ပွင့်ဖြူမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ် ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှသိရသည်။ လူနေအိမ်ကြိုတင်ပြောင်း ရွှေ့ခဲ့ရသည့်ကျေးရွာများမှာ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စားသုံးသူ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှု လက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ (CICC) သို့ ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မကျေနပ်ချက် တိုင်ကြားမှု ၂ဝ ရှိခဲ့၍ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရ ဟုဆို
မကွေး၊ ဇူလိုင်၂၁ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးစားသုံးသူ သတင်းပြန်ကြားရေးနှင့် တိုင်ကြားမှုလက်ခံ ဆောင်ရွက်ရေးစင်တာ (CICC) သို့ စားသုံးသူများဘက်က ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ မကျေနပ်ချက်တိုင်ကြားမှု၂ဝရှိကြောင်း မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစားသုံးသူ သတင်းပြန်ကြား ရေးနှင့်တိုင်ကြားမှုလက်ခံဆောင်ရွက်ရေးစင်တာမှသိရသည်။ အဆိုပါတိုင်ကြားရာတွင်ဝန် ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများစွာရှိသည့် အနက်ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးနှင့်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု၊ စားသောက် ဆိုင်ဝန်ဆောင်မှု၊...
ကျောက်ဖျာအနီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရေဆင်းချိုးရာမှ ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟုဆိုသော အထက်တန်း သူနာပြုအလောင်း တစ်ရက်အကြာ ပြန်တွေ့
မိုးမောက်၊ ဇူလိုင် ၂၁ ကချင်ပြည်နယ် မိုးမောက်မြို့နယ်တွင် ကျောက်ဖျာအနီး ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ရေဆင်းချိုးရာမှ အထက်တန်းသူနာပြုနှင့် ဓာတ်ပုံဆရာတို့ ရေထဲ မျောပါသွားသည်ဟုဆိုသည့် ဖြစ်စဉ်မှ အထက်တန်းသူနာပြု အမျိုးသမီး၏ အလောင်းကို တွေ့ ရှိခဲ့ခြင်းကြောင့် ဇူလိုင် ၂၁...
အောင်ပန်းတွင် ယာဉ်ထိန်း ရဲတပ်ကြပ်ကြီး ကားတိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
အောင်ပန်း၊ ဇူလိုင် ၂၁ အောင်ပန်း မြို့တွင် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ကြပ်ကြီး တစ်ဦးကားတိုက်ခံရသဖြင့် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကလောမြို့နယ် အောင်ပန်းမြို့ ကလော-အောင်ပန်းကားလမ်း (ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီး) အတိုင်း ကလောမှ အောင်ပန်းသို့ ပင်လောင်းမြို့နယ် တောင်မြေ ခြားကျေးရွာနေ...
တီးတိန်-ဟားခါး ကားလမ်းမပေါ်ရှိ နာမည်ကျော် ဗားရ်တံတားအနီး၌ တံတားတစ်စင်း အသစ်ထပ် တည်ဆောက်မည်
ဟားခါး၊ ဇူလိုင် ၂ဝ ချင်းပြည်နယ်ဆက်သွယ်ရေးတွင် အဓိကကျအသွားအလာများပြားသည့် တီးတိန်-ဖလမ်း-ဟားခါးကားလမ်း ပေါ်ရှိ နာမည်ကျော်ဗားရ်တံတားမှာ နှစ်သက်တမ်းကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါတံတားအနီး၌ အရန်တံတားတစ်စင်း စတင်ဆောက်လုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်စည်ပင်သာ ယာဝန်ကြီး ဦးစိုးထက်က ဇူလိုင် ၁၉ရက်က ပြောကြားသည်။...
မဲဆောက်တွင် ရက်ပေါင်း ၂ဝ ကြာ ထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၆၄ ဦး မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေး
မြဝတီ၊ ဇူလိုင် ၂ဝ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် ရက်ပေါင်း ၂ဝ ထိန်းသိမ်းခံထားသည့် မြန်မာနိုင်ငံသား ၆၄ ဦးအား ဇူလိုင် ၁၉ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ မြန်မာနိုင်ငံသား...
မိုးကုတ်မြို့၌ ကျောက်မျက် တူးဖော်ရေး တွင်းဟောင်းတစ်ခုအတွင်း ကျောက်ရှာဖွေသူ သုံးဦးအနက် တစ်ဦးမှာ အောက်ဆီဂျင်ပြတ်၍သေဆုံး
မန္တလေး၊ ဇူလိုင် ၂ဝ မိုးကုတ်မြို့ သဒွတ်သျိုကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျောက်ပုတ်ရွာတွင်ရှိသည့် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်ဟောင်းအတွင်းရှိ တွင်းဟောင်းတစ်ခုတွင် ကျောက်ရှာဖွေရေးသမားသုံးဦး အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတစ်ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ''ပေအရမ်းနက်တဲ့ နေရာကို ရောက်သွားကြတာ။ လေကလည်းမဝင်၊ လေပေးစက်တွေလည်းမရှိ ကြတော့ ဒီလူတွေ အောက်ဆီဂျင် ပြတ်သွားတာ။ စခန်းမှာအမှုဖွင့်ဖို့...
မိုးကောင်းတွင် ကောက်စိုက်သမတစ်ဦး မိုးကြိုးထိမှန်သေဆုံး ခြောက်ဦးစက်ကွင်းမိ ဒဏ်ရာရ
မိုးကောင်း၊ ဇူလိုင် ၁၉ ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် အောင် သာကျေးရွာတွင် ဇူလိုင် ၁၈ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းက မိုးရွာသွန်းပြီး မိုးကြိုးပစ်ခဲ့၍ ကောက်စိုက်နေသည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မိုးကြိုးထိမှန်သေဆုံးကာ ခြောက်ဦးစက်ကွင်းမိပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်း...
ချင်းပြည်နယ် လေးမြို့မြစ်ပေါ်တွင် မဂ္ဂါဝပ် ၆ဝဝ ထွက်ရှိမည့် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ တည်ဆောက်မည်
ပလက်ဝ၊ ဇူလိုင် ၁၉ ချင်းပြည်နယ်တွင် အကြီးမားဆုံး ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်နိုင်သည့် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် တည် ဆောက်မည့် လေးမြို့မစ်စီမံကိန်းကို ပြင်သစ်နိုင်ငံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ တည် ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ရာ ယခုအခါ ရှေ့ပြေးဖြစ်နိုင်ခြေ စူးစမ်းလေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း...
Page 1 of 187 12… 187 Next
အမြန်လမ်းပေါ် လမ်းလယ်ကျွန်းကို တိုက်မိပြီး ရပ်နေသော ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကို ခရီးသည်တင် ယာဉ် ထပ်တ??
အရှေ့ အနောက် စီးပွားရေးစကြံ င်္လမ်းပိုင်းတွင်ပါရှိသော မော်လမြိုင် – မုဒဟန် တိုက်ရိုက် ကုန်သွ??
နာမည်ကျော်အိုင်ယာလန်ဂီတာကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီး ဂီတာထုတ်မယ့် အက်ရှီယန်
Avatar နောက်ဆက်တွဲ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် မရေမရာဖြစ်နေတဲ့ ဒါရိုက်တာကြီး ဂျိမ်းစ်ကင်မရွန်
မန္တလေးမြို့တွင် ကျပ်သိန်း ၅ဝဝ မှ ကျပ်သိန်း ၁ဝဝဝ ကြားရှိ အိမ်ခြံမြေများ အရောင်းသွက်နေ၊ ဝါတွင
ကညနဝန်ထမ်း လာဘ်စားလျှင် ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည် ဟုဆို
ဝန်ကြီးများ အောက်ခြေလွတ်သွားပြီး လွှတ်တော်အမတ်များမှာ ငါ့မြင်းငါစိုင်း စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် လုပ်နေဟု ဒီချုပ် ဒုဥက္ကဋ္ဌဝေဖန်
အကြွေးတောင်းရာမှ ရန်ဖြစ်ပြီးဓားဖြင့် ထိုးမှု ရွှေပြည်သာတွင်ဖြစ်ပွား၊ တစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးစိုးရိမ်ရ